Khilaafka u dhaxeeya Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi oo gaaray meel sarre - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Hargeysa (Caasimada Online) – Khilaafka ka dhashay guddiyada doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee labada gole ayaa sarre usii kacay, kaasi oo hadda ka dhex aloosan ra’iisal wasaare kuxigeenka dalka iyo guddoomiyaha golaha aqalka sarre ee baarlamaanka.
Mahdi Guuleed oo xukuumada u hadlay ayaa dhowr jeer weerar culus ku qaaday Cabdi Xaashi oo isagu ku doodaya inuu mudan-yahay in guddiyada doorasho ee xildhibaanada waqooyi uu soo magacaabo, taasi oo ay ku taageeren mucaaridku.
Haddaba, guuxa khilaafkaasi ayaa gaaray deegaanada Somaliland, iyada oo qaar kamid ah siyaasiyiinta deegaankaasi ay ka digeen in murankaasi uu horseedo tafaraaruq kala qeybiya bulshada waqooyi.
Siyaasi Cabdillaahi Cabdi Xaaji Cumar (Jawaan) oo arrintaasi ka hadlay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sheegay in khilaafka ka dhexeeya guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Soomaaliya uu yahay wax laga xumaado, maadama labadii mas’uul ee ugu sareeyay la iska soo horjeediyay.
“Muqdisho sida aad ogtahay calankii shanta gees ee shanta Soomaaliyeed ka dhexeeyey ayaa Dastuurka ugu qoran, in Soomaali shanta Gobol calankaasi ka dhexeeyo, reer Jabuuti ayaa Barlamaanka ku jira, kuwa Itoobiya ka tagay baa ku jira, kuwa NDF Kenya ka yimid ayaa ku jira, iyo kuwii Soomaaliya ayaa jooga, shantii Soomaaliyeedba Barlamaanka Soomaaliya way ku jiraan,” ayuu yiri.
Waxa uu intaas raaciyey “Haddii qabiil loo eego waan ka xumahay in labadoodii ugu sareeyey ee mid ahaa guddoomiyaha guurtida ee aqalka sare ee Soomaaliya, midna ahaa Ra’iisal wasaare ku-xigeen in la iska soo hor jeediyey, waxay ku tahay gunimo, waxay ku tahay fool xumo, waxaan leeyahay waar labadiinu ha wada hadlina.”
Siyaasiga ayaa taageero u muujiyey Cabdi Xaashi oo uu sheegay in uu xaq u leeyahay in wax laga weydiiyo xulista guddiyada gobolada waqooyi, maadama uu yahay mas’uulka u sareeya ee metela, sida uu hadalka u dhigay.
“Cabdi Xaashi haddii uu yidhi ‘Haddii gobol lagu sheegayo iyo haddii qabiil la eegayaba, waxaan ahay ninkii ugu sareeyey ee wax ha laga iga weydiiyo’ xaq buu u leeyahay, Mahdi-na waxaan leeyahay is kaashada oo ha kala baydhina, anigu waxaan idiin arkaa niman shaqo tagay, Soomaali oo dhan baa u shaqo tagta meesha oo anigu idinku eedayn maayo ee iska shaqaysta, laakiin idinku ha iska hor imanina.”